Iiklasi ezingama-25 eziPhezulu zokuLawulwa komsindo kwi-Intanethi ngo-2022
Le posi yebhlog ibonelela ngeenkcukacha kwiiklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi onokuthi uzithathe kwinduduzo yekhaya lakho okanye nayiphi na enye indawo ebonakala ikhululekile kuwe.
Ukuba nomsindo okanye ukuba nomsindo kuyinxalenye yobuntu kodwa ngokuqinisekileyo ineziphumo ezithile emva koko ingakumbi ukuba awazi ukuba ulawule njani okanye ulawula umsindo wakho. Umsindo ungalawulwa okanye ulawulwe ngokufanelekileyo kwaye ungafundiswa ukuba ungayenza njani loo nto ziingcali zengqondo.
Ezi klasi zolawulo lomsindo ezikwi-Intanethi azenzelwanga kuphela abantu abanemicimbi yomsindo ocacileyo. Njengomphathi weprojekthi okanye naluphi na uhlobo lomphathi kwintlangano ekuvumela ukuba ulawule kwaye uphathe abanye abantu, ngokuqinisekileyo kufuneka usebenze kubuntu bakho kwaye ezi klasi zikwi-Intanethi ziya kukunceda.
Ngobuntu obuhle obubandakanya ukubeka umsindo wakho, uya kuba yinkokeli emangalisayo kwaye ukwazi ukuqonda abantu abaphantsi kwakho.
Apha, ndenze uluhlu kunye neenkcukacha zeeklasi eziphezulu zolawulo lomsindo kwi-intanethi kodwa ngaphambi kokuya kuloo nto, jonga ii-FAQs ezingezantsi.
1 Yintoni Ulawulo Lomsindo?
2 Ngaba ukulawula umsindo kuyabiza?
3 Ngaba umsindo sisigulo sengqondo?
4 Ngaba imicimbi yomsindo yimfuzo?
5 Zithini iimpawu zemiba yomsindo?
6 Ngaba iiklasi zolawulo lomsindo ziyasebenza?
7 Zeziphi iindidi ezintathu zomsindo?
8 Ngaba imiba yomsindo inganyangeka?
9 Iiklasi zokuLawulwa komsindo kwi-Intanethi
9.1 Unyango lwe- # 1 kwi-Intanethi
9.2 # 2 Udemy
9.3 # 3 Indlela evulekileyo
9.4 # 4 Uncedo olungcono
9.5 # 5 IZiko loQeqesho loLawulo loMsindo
9.6 # 6 Iqela leLogan Int.
9.7 # 7 Masters ingqumbo
9.8 # 8 Izifundo
9.9 # 9 Iklasi yam yeNkundla
10 Indlela yokufumana iiklasi zolawulo lomsindo simahla kufutshane nam
11 Iiyure ezi-4 zokuLawulwa komsindo simahla kwiKlasi
12 Ixabiso eliphantsi lokulawula umsindo
13 KwiNkundla yokuLawulwa koMsindo kwi-Intanethi yamkelwe
14 Ikhosi yasimahla yokuLawulwa komsindo e-UK
Yintoni Ulawulo Lomsindo?
Ulawulo lomsindo yinkqubo yonyango yengqondo yokuthintela umsindo kunye nokulawula. Inkqubo ibandakanya ukufunda ukuqaphela imiqondiso yokuba unomsindo kwaye uthathe inyathelo lokuzola kwaye ujongane nemeko ngendlela enemveliso.
Ngaba ukulawula umsindo kuyabiza?
Iindleko zonyango lolawulo lomsindo ziphakathi kwe- $ 20 ngeseshoni ukuya kwi- $ 100 ngeyure. Nangona zimbalwa ezi klasi zisimahla kwaye zikwi-Intanethi, zikwadwelisiwe kule posti yebhlog.
Ngaba umsindo sisigulo sengqondo?
Umsindo ngokwawo awuthathwa njengokuphazamiseka kodwa umsindo luphawu olaziwayo lweemeko zempilo yengqondo. Umsindo ubangelwa zizinto ezininzi ezinje ngoxinzelelo, iingxaki zosapho, kunye nemicimbi yezemali. Kwabanye, umsindo ubangelwa sisifo esingumqobo, njengokunxila okanye ukudakumba.
Ngaba imicimbi yomsindo yimfuzo?
Ngokophando lwakutsha nje oluqhutywa ngabaphandi abavela kwiDyunivesithi yasePittsburgh, kwafunyaniswa ukuba indlela ethile yokuziphatha enjengomsindo, ubundlongondlongo kunye nokuba ndlongondlongo kunokuba yimfuza, kubangelwe yantlukwano kwiseli ye-serotonin receptor.
Zithini iimpawu zemiba yomsindo?
Ezinye zeempawu ezibonakalayo zomsindo zezi:
Ukungcangcazela okanye ukungcangcazela
Ukunyuka kunye nokukhawuleza kwentliziyo
Ukubila ezintendeni okanye kwamanye amalungu omzimba
Ukuziva ushushu entanyeni kunye / okanye ebusweni
Ngaba iiklasi zolawulo lomsindo ziyasebenza?
Ewe, iiklasi zokulawula umsindo ziyasebenza. Iiklasi ziya kukunceda unxibelelane neemfuno zakho ngendlela esempilweni kwaye zikuncede ugcine impilo esempilweni njengoko iiklasi zinceda ukunciphisa amathuba akho okujika kwiziyobisi okanye kotywala njengendlela yokujongana noxinzelelo, unxunguphalo kunye nomsindo.
Zeziphi iindidi ezintathu zomsindo?
Ezi ntlobo zintathu zomsindo zezi:
Ngaba imiba yomsindo inganyangeka?
Umsindo awunakunyangeka kodwa unokulawula ubungqongqo kunye nefuthe elinalo kuwe kwaye yiyo loo nto ezi klasi zolawulo lomsindo ezikwi-Intanethi zenzelwe.
Ngokucaca konke okuqwalaselwayo, kufuneka siqhubele phambili siye kumbandela ophambili…
Iiklasi zokuLawulwa komsindo kwi-Intanethi
Ukudweliswa kwaye kuchaziwe apha ngezantsi ziiklasi zolawulo ezikwi-Intanethi ezisi-7:
Unyango lwe- # 1 kwi-Intanethi
Unyango olukwi-Intanethi lolunye lweeklasi zolawulo lomsindo ezikwi-intanethi kunye neqela elizinikeleyo leqela elisekwe kwi-Intanethi labanyangi, iingcali zokuziphatha, iingcali, kunye nabasebenzi bokuxhasa abasebenza kunye ukunceda abantu abadinga inkxaso yemvakalelo kubandakanya imicimbi yomsindo. Abanyangi apha ziingcali ezinelayisensi kunye neeyure ezininzi zamava asebenzayo.
Nje ukuba ubhalise kwiwebhusayithi, uya kunikwa i-Therapist yakho kwaye baya kuba secaleni kwakho kulo lonke uhambo lwakho, bakukhokele ukuba wonwabe ngakumbi kwicandelo, ukuthumela imiyalezo, kunye neeseshoni eziphilayo. Ukwafumana ibhokisi yezixhobo ebonelela ngezixhobo ezinje ngeephepha lokusebenzela, ijenali, kunye nesicwangciso somsebenzi esenzelwe ukukunceda uhlale umkhondo kwaye ulawule imiba yomsindo wakho ngokufanelekileyo.
Zintathu izicwangciso ezibiza amaxabiso ahlukeneyo kwaye zibonelela ngamava ahlukileyo, ezi zicwangciso zezi:
Isisiseko: Isicwangciso esisisiseko sibiza i-31.96 yeedola ngeveki kwaye ungafikelela kuma-worksheet angama-25 kunye neempendulo zemihla ngemihla ezivela kunyango ukusukela ngoMvulo kude kube nguLwesihlanu, kubandakanya nonyango olukhokelwa nguwe olunemodyuli ezisi-8. Ukongeza, ufumana i-yoga, ukucamngca, isicwangciso somsebenzi, iijenali, iimvavanyo kunye neevidiyo.
Umgangatho: Isicwangciso esisemgangathweni sibiza i-47.96 yeedola ngeveki kwaye sikufumanela yonke into kwisicwangciso esisisiseko kunye nengxoxo eyongeziweyo ephilayo kunye ne-Therapist yemiyalezo yeveki kunye neyonyango nangaliphi na ixesha.
Premium: Isicwangciso seprimiyamu sibiza i-63.96 yeedola ngeveki, iza nayo yonke into kwizicwangciso zangaphambili kunye neempendulo ezivela kwingcali yakho.
I-Udemy liqonga lokufunda elikwi-Intanethi apho ungafunda khona iintlobo zezakhono zezandla, ulwazi, kunye neendlela zamva nje phantse kuzo zonke izihloko. Ukujika kweqonga akuphelelanga apho, kuyandiswa ukubonelela ngeeklasi zolawulo lomsindo ezingama-50 ezibonelelwa ngabagqirha abaqinisekisiweyo kunye naphakathi kwe-20 yeedola ukuya kwi-100 yeedola ukuthenga iividiyo.
Zininzi zezi klasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi e-Udemy, hamba kuzo kwaye ukhethe efanelekileyo kuwe.
# 3 Indlela evulekileyo
KwiNdlela evulekileyo, iwebhusayithi yonyango ekwi-intanethi, unokufikelela kwizifundo ezisibhozo zokulawula umsindo ezinokwahluka kubude phakathi kwe-4 kunye neeyure ezingama-52. Ziziiklasi zolawulo lomsindo ezikwi-Intanethi ezenzelwe ukukunceda ukuba ulawule iimvakalelo zakho kwaye ufunde indlela yokuwuphatha kakuhle umsindo wakho. Iiklasi apha ziyahlangabezana nokuvunywa kwenkundla e-United States, Canada, New Zealand, nase-Australia, jonga kwilizwe lakho ukuba iyamkelwa inkundla.
Iklasi nganye inokugqitywa ngeyure enye kodwa ungahamba ngesantya sakho kwaye unikeze isatifikethi sokugqitywa wakugqiba iiklasi ngempumelelo. Ukubhalisa, uya kuhlawula umrhumo wobhaliso lwexesha elinye oyi- $ 5 ukongeza kwimirhumo yezifundo edla ngokususela kwi- $ 17 ukuya kwi- $ 115 kuxhomekeke kwikhosi oyithathileyo.
Iiklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi kwiNdlela evulekileyo zibonelela ngeentsuku ezingama-30 zokubuyisa imali.
# 4 Uncedo olungcono
I-Betterhelp yiwebhusayithi yonyango ebonelela ngeeklasi zolawulo lomsindo kwi-intanethi phakathi kwezinye iindidi zokunceda abantu. Xa kuziwa kunyango lomntu ngamnye, le webhusayithi iyintandokazi yabantu kwaye inokuba yeyakho nayo ukuba uyazama. Nangona ingonelisi ngeemfuno zeklasi yokulawulwa komsindo kodwa iya kukunceda ulawule imicimbi yakho yomsindo kwinqanaba lomntu.
I-Betterhelp ineengcali ezingaphezulu kwe-20,000 ezinelayisensi nganye ngaphezulu kweminyaka emithathu kunye neeyure ezili-1,000 XNUMX zamava asebenzayo. Nje ukuba ubhalise kwiwebhusayithi, uya kuphendula imibuzo ethile, enjengophando olwenziweyo malunga nawe, eya kuthi incede isiza sikudibanise nonyango oluchanekileyo lokujongana nomba wakho. Unyango lwenziwa ngemiyalezo, iiseshoni zokuxoxa, iiseshoni zokumamela, kunye neeseshoni zevidiyo usebenzisa iPC yakho okanye i-smartphone.
Kuxhomekeke kubhaliso lwakho, iifizi ziphakathi kwe- $ 60 kunye ne- $ 90 ngeveki.
# 5 IZiko loQeqesho loLawulo loMsindo
Ewe, kwigama sele usazi ukuba eli ziko libonelela nge-top-notch online kwiiklasi zolawulo lomsindo. Nokuba kunjalo, masibone ukuba banikela ngantoni…
IZiko loQeqesho loLawulo loMsindo libonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi, uqeqesho lonyango, incwadi yokusebenzela ehamba phambili, kunye nesixhobo sovavanyo somsindo. Ezi ziinketho kuqeqesho lolawulo lomsindo, zeza nezicwangciso ezahlukeneyo zokubhaliselwa kunye nemirhumo. Ekupheleni kwesifundo ngasinye, uya kuthatha imibuzo emfutshane ngaphambi kokuba uye kwiklasi elandelayo.
Ufuna ukupasa ikhwizi okungenani ngamanqaku angama-80% kwaye ungawathatha amaxesha amaninzi kangangoko ufuna. Emva kokugqiba yonke ikhosi yokulawula umsindo, uya kuthi emva koko uthathe uviwo oluza kukufumanela isatifikethi esishicilelweyo. Izatifikethi ezivela kwiziko kufuneka zamkelwe ziinkundla ezininzi kwaye ukuba akunjalo, ungabonisa iziko ubungqina obubhaliweyo besatifikethi sakho esaliwe kunye nokufumana imbuyiselo epheleleyo.
Iindleko zeeklasi ziphakathi kwe- $ 65 kunye ne- $ 100.
# 6 Iqela leLogan Int.
Ungakhangeli njengendawo apho ungasombulula khona imicimbi yakho yomsindo, akunjalo?
Iqela leLogan Int. yenye yezona zinto zibalaseleyo phaya ekunikezeleni ngeeklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ikwasasazeka nakwezinye iindidi zeeklasi ezinje ngeeklasi zeziyobisi notywala ukuya ezivenkileni nakubusela. Kukho iikhosi ezisithoba ezahlukeneyo zolawulo lomsindo ezisusela kwi-4 ukuya kwi-52 yeeyure kwaye zibiza i- $ 24.95 ukuya kwi- $ 159.95 kuxhomekeke kubude.
Kwimeko apho ufuna inkqubo yesiqhelo, ungabhalisela iiklasi zeveki ezifumaneka kubude be-12, 24, 26, 36, okanye iiveki ezingama-52 ngamaxabiso eveki aqala kwi- $ 59.95 ukuya kwi- $ 159.95. Iiklasi nazo zizenzela kwaye ufumana ileta yokugqitywa wakugqiba inkqubo. Ileta yamkelwe ngokubanzi ziinkundla, izikolo, nabaqeshi kulo lonke elaseKhanada naseMelika.
Inokuba nomdla kuwe ukwazi ukuba iQela leNgonyama i-Int. inikezela ngesiqinisekiso esilinganayo sexabiso, kwaye akukho mfuneko yokuba uhlawule iklasi de uyigqibe.
# 7 Masters ingqumbo
Ingqumbo yeMasters ibonelela ngothotho lweeklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi kubantu abazimisele ekusebenzeni ekukhuleni kwabo buqu kwaye balahle imiba yomsindo. Indawo inikezela abantu ngeeklasi zolawulo kwi-intanethi ezipheleleyo ezenzelwe ngumqeqeshi oqinisekisiweyo weNAMA ukuba ahlangabezane nemigangatho yesizwe kwaye eze ngamaxabiso afanelekileyo.
Zonke iiklasi zikwi-Intanethi, ziyazinyanzela, zizifundele, ziphuhliswe ziingcali, zamkelwe kuwo onke amazwe, zibonelela ngeleta yobhaliso yasimahla, kwaye zinikezela ngesiqinisekiso simahla sokugqitywa. Ungathatha isigqibo sokuya nakweyiphi na yeeklasi zeyure ezisusela kwiiyure ezi-4 ukuya kwiiyure ezingama-52 kwaye ziqala ngexabiso le- $ 24.99 ukuya kwi- $ 149.99 okanye ukuba unomdla kwiiklasi zeveki nganye, iqala ukusuka kwiiveki ezi-4 ukuya kwiiveki ezingama-52 kwaye lixabiso elifanayo njengeeklasi zeyure.
# 8 Izifundo
Ikhosi liqonga lokufunda elikwi-Intanethi elinikezela ngezifundo ezahlukeneyo ezibandakanya uqeqesho ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zibonelela ngeeklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi ezikhululekileyo ukuba zijoyine. Kukho iikhosi ezingama-25 zasimahla zokulawula umsindo kwi-Coursesity, ziyazihambela, kwaye ngelixa ezinye zinikezela ngesiqinisekiso sokugqitywa ezinye azenzi njalo.
Uluhlu lwezifundo alunasiphelo kwaye kukuwe ukuba uzikhangele kwaye ukhethe eyona ikulungeleyo.
# 9 Iklasi yam yeNkundla
Iklasi yam yeNkundla inikezela ngeeklasi zolawulo kwi-intanethi ezenziwa ngabacebisi abaziingcali kwaye ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zenkundla. Iiklasi zinikezelwa ngeyure, ukuqala kwiiyure ezi-4 kwii-55 zeedola ukuya kuma-52 iiyure kwi-395 yeedola, kuthatha iklasi ezili-10 zizonke. Isatifikethi esisemthethweni sokugqitywa sithunyelwa emva kokugqiba iiklasi zakho.
Indawo ibonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-60 nje ukuba isiqinisekiso sakho siyaliwa yinkundla.
Ezi ziiklasi zolawulo kwi-intanethi onokuthi ubhalise kuzo, zinikezelwa kwi-Intanethi, kwaye ukufunda kuyazenzela.
Indlela yokufumana iiklasi zolawulo lomsindo simahla kufutshane nam
Iiklasi zolawulo lomsindo ozifunayo sele zidwelisiwe kwaye zichaziwe kule posi yebhlog kunye nekhonkco lokubhalisa kunye nokuqala ukufunda. Ungabhekisa kwi-MOOCs kwi-Coursera onokuyifumana ngeGoogle kwaye ubhalise kwiiklasi zolawulo lomsindo zasimahla ozikhethele zona.
Kananjalo, kuba zonke iikhosi zikwi-Intanethi ezenza ukuba ngokuzenzekelayo zikufuphi kuwe.
Iiyure ezi-4 zokuLawulwa komsindo simahla kwiKlasi
Kuyinyani, azikho naziphi na iiklasi ezilawulwa ngumsindo kwi-Intanethi ezinokufikeleleka okanye zitshiphu kunabanye kodwa zisimahla. Iiklasi ekuxoxwe ngazo ngasentla zibonelela ngexabiso eliphantsi lokulawula umsindo, unokufuna ukubhekisa kubo.
Ixabiso eliphantsi lokulawula umsindo
Iiklasi zokulawula umsindo ezinamaxabiso aphantsi zinokuba ngumceli mngeni ekuzifumaneni kodwa ungazifumana kwezi webhusayithi zilandelayo:
KwiNkundla yokuLawulwa koMsindo kwi-Intanethi yamkelwe
Iiklasi zolawulo kwi-intanethi ezamkelwe ziinkundla zezi:
Iklasi Yam Yenkundla
Iqela leLogan Int.
Iziko loQeqesho loLawulo loMsindo
Ikhosi yasimahla yokuLawulwa komsindo e-UK
I-UK ayinazo iikhosi zasimahla zokulawula umsindo kwi-Intanethi, unokufumana kuphela ngexabiso eliphantsi kule webhusayithi ilandelayo:
Isikolo esitsha seZakhono
Iikhosi zolawulo kwi-Intanethi apha zibiza i- £ 10 ukuya kwi- £ 20.
Iintlobo ezi-7 eziphambili zoLawulo lweNkunkuma enemizekelo
Iikhosi ezili-15 eziPhambili zoLawulo lokusiNgqongileyo kwi-Intanethi ngoku
izifundo zekhompyutha Iikhosi ze-Intanethi funda kwi-intanethi
Iiklasi zokulawula umsindo ezinamaxabiso aphantsiiiklasi zokulawula umsindoIiklasi zolawulo lomsindo kwi-Intanethi e-UK
Post Previous:Iingcebiso zokufumana indawo yokuhlala yabafundi efanelekileyo ekhaya okanye kwelinye ilizwe
Okulandelayo Post:Izikolo eziBalaseleyo zoBunjineli ze5 eCalifornia ngeeScholarship